Garoonka diyaaradaha ee Zurich iyo Basel - Waa mid qaas ah oo raaxo leh
Garoonka diyaaradaha ee Zurich iyo Basel
Soo gaadho si amaan ah iyo si deg deg ah - adoo adeegsanaya Adeegga Bedelka Premium
Ma qorsheyneysaa inaad si gaar ah u socoto ama ganacsiga oo aad jeclaan laheyd inaad hubiso safar macquul ah oo leh adeega gaadiidka ee lagu kalsoonaan karo ka hor inta aadan safrin?
Saaxiibkayagu wuxuu kaa qaadi doonaa mid ka mid ah tayadeena tayada sare leh, oo nadiif ah oo Jarmal ah oo guriga ku yaal, laga soo bilaabo xafiiska ama garoonka albaabka. Dabcan waxaan kaa caawin doonaa boorsada. Dabcan, waa in diyaaradaadu soo daahdaa, ma joojineyno, laakiin sug in aad timaado.
Soo degso oo raaxeysto markaad tageyso
Qaar badan oo ka mid ah rakaab ah u isticmaalaan adeega garoonka diyaaradaha Slaam u dhexeeya garoonka Zurich iyo Euro Airport Basel, waayo, link a rail toos ah si toos ah uma u dhexeeya labada qanjidhada weheliyaan keeni. Si aad safarka baska raaxo ama kortaan taxi duldhigay in isbadbaadi, doorashada for our Slaam garoonka waa go'aanka saxda ah. Iyada oo xafiiska our ee Basel ee saddexagalka xadka u dhaxeeya France, Switzerland iyo Germany, waxaan sidoo kale waa qofka kugu habboon haddii ay tahay si ay u tagaan km Freiburg ama si toos ah u Stuttgart ama Munich in our limousine barax-tiran ee 70 ah.
Airport Shuttle Zurich iyo Basel - Tel: + 41 78 861 35 50
Had iyo jeer saxan saxda ah ee bilowga
Miyaad u safreysaa shakhsi ahaan kulan ganacsi oo muhiim ah? Kadibna waxaad ku xisaabtami kartaa safar degan, waqti ku-meel gaadh ah oo ku-meel-gaadh ah iyo, dabcan, 100% siyaddeena inta lagu jiro wicitaanka telefoonkaaga. Qoys ahaan ama koox ahaan waxaad leedahay laydin ballaaran oo aad u baahato, taas oo aad ku raaxeysan kartid safarka raaxada leh ee aan ku marno madaarka diyaaradeena adoo maraya Switzerland qurux badan. Marka lagu daro nabadgelyada iyo wakhti kasta, darawalkayagu waxa uu doonayaa in safarkaagu noqdo mid sahlan.
Gaadiidka duulimaadka ee dukaanka internetka
Fadlan naga tag macluumaadka taariikhda safarkaaga xiriirkaWaan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan si aad ugala hadashid faahfaahinta. Waxaad nagula soo xiriiri kartaa telefoonka + 41 78 861 35 50
Waxaa lagu calaamadeeyay: Basel garoonka Shuttle adeegga limousine Zuerich
taxi.flughafen Januar 23, 2017 Januar 23, 2017 Uncategorized Faahfaahin la'aan
← Gaadiidka basel Basel - safar raaxo leh ee Switzerland
360 ° Adeegga bedelka martida martida ee Basel →